Imandarmedia.com.np: शीर्ष नेता हत्याको योजना बनाएको भन्दै डिआईजी नवराज सिलवालमाथि लाग्यो गम्भीर आरोप !
Main News, News » शीर्ष नेता हत्याको योजना बनाएको भन्दै डिआईजी नवराज सिलवालमाथि लाग्यो गम्भीर आरोप !
शीर्ष नेता हत्याको योजना बनाएको भन्दै डिआईजी नवराज सिलवालमाथि लाग्यो गम्भीर आरोप !
प्रहरीका डिआईजी एवं प्रहरी महानिरीक्षकका दाबेदार नवराज सिलवालमाथि रानजीतिक दलका शीर्ष नेताको हत्या योजना बनाएको आरोप लागेको छ ।
सिलवाललाई प्रहरीले केही समयअघि महानिरीक्षक नियुक्तिसम्बन्धी मुद्धा प्रभावित गर्ने मनसायसहित सर्वोच्च अदालतमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन किर्ते गरी बुझाएको आरोपमा पक्राउ गरेको थियो । यद्यपि सर्वोच्चको बन्दी प्रत्यक्षीकरण आदेशमा सिलवाल सोही दिन रिहा भएका थिए । त्यसयता उनी घरमै आराम गरिरहेका छन् ।
प्रहरी प्रधान कार्यालय उच्च स्रोतका अनुसार सिलवालमाथि छानबिनका लागि डिआईजी विजय भट्ट नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिले बयान लिने क्रममा शीर्ष नेताको हत्या प्रयास गर्न लागेको सूचना आएको भन्दै सिलवालमाथि प्रश्न गरेको थियो ।
‘तपाईंले राजनीतिक दलका केही शीर्ष नेताको हत्या योजना बनाएको सूचना आएको छ, के त्यो साँचो हो ?’, बयानका क्रममा सोधिएको थियो । सिलवालले संगठित अपराधिक समूह परिचालन गरी नेता हत्याको योजना बनाएको आरोप लगाइएको छ । यद्यपि कुन दलका कुन नेताको हत्या प्रयास गरेको भन्दै प्रश्नकर्ताले खुलाएका थिएनन् । जवाफमा सिलवाललले आफूमाथि अनर्गल आरोप लगाएर चरित्र हत्या गर्न खोजेको भन्दै प्रतिवाद गरेका थिए । प्रश्न सुनेर आवेगमा आएका सिलवालले बयान लिने अधिकारीलाई मुखै छाडेका थिए । काठमाडौं टुडेमा खबर छ ।
२०७४ बैसाख २५ मा प्रकाशित ।